Resistance Waya, Heating Waya, nickel waya - TANKII
Ceramic / mweya Vhura coil heaters / kudziyisa chinhu w ...
Yakachena nickel kuramba waya
Mhangura Nickel chiwanikwa Wire
Iron Chrome Aluminium Resistance Alloys
TANKII ALLOY (XUZHOU) CO., LTD. anga achinyatsobatikana mumunda wezvinhu kwemakumi emakore, uye akagadza kwenguva yakareba uye yakakura hukama hwekudyidzana mumisika yepamba neyekunze. Zvigadzirwa zvaro zvakaendeswa kunze kwenyika dzinopfuura makumi mashanu nematunhu uye zvakarumbidzwa nevatengi vekunze.
Tankii chiwanikwa (Xuzhou) Co., Ltd. ndiyo yechipiri fekitori yakadyarwa neShanghai Tankii Alloy Zvekushandisa Co, Ltd., ichinyatsogadzira kugadzirwa kwemhando yepamusoro-yemagetsi yemagetsi kupisa alloy waya (nickel-chromium waya, Kama waya, iron-chromium -aluminum waya) uye kunyatso…
Tankii Apm Buda
Munguva pfupi yapfuura, timu yedu yakabudirira kugadzira TANKII APM. Iyo yepamusoro poda metallurgical, kupararira kwakasimbiswa, ferrite FeCrAl alloy iyo inoshandiswa pathubhu tembiricha kusvika kuna 1250 ° C (2280 ° F).
Inogona sei kupenya machubhu kugara kwenguva yakareba
Muchokwadi, yega yega magetsi kupisa ...
Iwe unoziva here ruzivo rwese nezve res ...
Kune iyo yekumisikidza waya, simba redu redu ...
Sayenzi Kunyorera, Nichrome, Nickle Chrome Alloy Wire, Ion Nitriding, Kuayina Machines, Ribbon Alloy Bayonets,